गगनको गर्जन : प्रधानमन्त्री ज्यू, घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्‍यो ? (भिडियो) - Postmandu
गगनको गर्जन : प्रधानमन्त्री ज्यू, घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्‍यो ? (भिडियो)
2019-07-07 2019-07-09 PostmanduLeaveaComment on गगनको गर्जन : प्रधानमन्त्री ज्यू, घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्‍यो ? (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले पारीबाट आएको खोकीको मन्द आवाजले सरकार थला परेको बताए ।
सरकारले सीमा क्षेत्रमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि त्यसको आलोचना गर्दै काँग्रेस नेता थापाले भने, ‘भारतबाट आउने फलफूल र तरकारी मात्र होइन, नेपालबाट जाने चिया र अलैंचीबारे पनि हिसाव किताब होला भन्ने लागेको भए पनि पारीबाट आएको खोकीको मन्द आवाजले सरकार थला परेको छ ।’
Gagan Thapa – गगन थापा
प्रधानमन्त्री ज्यू, घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्‍यो ?भारतबाट ल्याइने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएकोमा सरकारविरुद्ध गजिए गगन थापा ।
Posted by CEC tv nepal on Sunday,7July 2019
प्रधानमन्त्रीको मान राख्न मास्क नलगाई हिँडे जस्तै महंगो तरकारी खाएर होस् वा तिहुन बिनाको भोजन खाएर होस् सरकारलाई साथ दिन आम नागरिक तयार रहेको थापाको भनाई छ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्यो भनेर प्रश्न सोधेका छन् । थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यति मात्र सोध्न बाँकी छ, तपाईंको राष्ट्रवादी खुट्टा देखिएकै थियो । घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्‍यो ?’
राखेप सदस्य सचिवमा रमेश सिलवाल
कबड्डी कबड्डी कबड्डीमा पार लाग्ला त दयाहाङको प्रेम ? (टीजर हेर्नुहोस्)
आफन्तकै सहयोगमा भारतमा पक्राउ परेका थिए ‘गोरे’
2018-05-23 2018-05-24 Postmandu
डिएसपी चिरञ्जिवि कोइराला नेतृत्वको प्रहरी टोलीबाट अवैध मदिरा नष्ट
तराइदेखि हिमालसम्मः यसरी बिताए मोदीले दुई दिन